HomeစကားပုံများIntroductionနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းBurmese FontBooks – စာအုပ်များVocab — ဝေါဟာရ
Categories: Burmese -- မြန်မာစကား | Permalink.	8 thoughts on “ခရစ္စမှတ်အချိန်။”	Leaveacomment
December 25, 2012 at 01:11	၀င်းဟိန်းလည်း ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ ပျော်စရာခရစ္စမတ် ပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင်🙂
December 25, 2012 at 02:10	ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အမ။
Reply	May Moe Thu @La Angel
February 25, 2013 at 00:47	Candy ကိုတောင် အမလို့ခေါ်ရင် ကိုဝင်းဟိန်းက အတော်ငယ်အုံးမယ့်ပုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ် လေးစားမှုအရခေါ်တယ်ပဲမှတ်လိုက်မယ်။ ဒီနေ့ မနက်မှ နောနော်ရဲ့ သီချင်းကို “အဖြူကောင်”ကဆိုထားတယ်ဆိုတာကနေ အမှတ်မထင်တွေ့မိပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်တိုက် ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်နေ၊ ကြည့်နေတာ နေ့လည်စာလွတ်ပြီး အချိန် ၂ နာရီလောက်ကုန်သွားပြီ။ ပြောချင်တာက တစ်ခြားစာစု အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သလိုပဲ ကျွန်မတို့ လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ နဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီပေးပါ့မယ်လို့။
February 25, 2013 at 05:01	အားလုံးမင်္ဂလာပါ။
February 25, 2013 at 05:02	Hope you don’t mind all those repeated corrections. ^^
Reply	Win Hein
February 25, 2013 at 07:52	Nope, I love them! You’re doing exactly what I want every single person who reads this to do😀
February 25, 2013 at 07:51	“မှတ်မိရမှာက” လို့ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
May 6, 2013 at 22:01	အားစိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားရေးထားတဲ့ ၀င်းဟိန်းကိုရော… အမှားတွေကို သေချာပြင်ပေးသွားတဲ့ ညီမ mydaydream ကိုရော တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်… ဒါနဲ့ ၀င်းဟိန်းဆိုတဲ့ နာမည်လေး ရလာတဲ့ အကြောင်းလဲ ပိုစ့်ရေးပါအုံး…. သိချင်လို့…
Recent Posts	To whom it may concern in USA Government and authorities in Fort Wayne, Indiana State
Categories	Addressed to the Whities